Intliziyo yeDowntown eneFirepit kunye nokuHamba ukuya eLwandle
Indawo ephambili entliziyweni yedolophu yaseSan Clemente kwimbali yeAvenida Del Mar! Iindawo zokutyela ezimangalisayo, imivalo kunye nokuthenga iboutique kukuhamba nje amanyathelo. Ulwandle, i-pier, kunye ne-trail yaselwandle zisehla nje endulini! Okungcono, i-trolley yasimahla ithatha yonke i-20min yonke ihlobo phambi kwe-condo. Yiza uhlale ukufutshane kuyo yonke! Yonwabela ixesha kunye nosapho kunye nabahlobo kwibalcony yakho yabucala enomgodi womlilo okanye udlale imidlalo yebhodi ebonelelweyo. Indawo yokupaka enikezelweyo kunye newasha / isomisi ibandakanyiwe nayo.
I-condo esandula kulungiswa ine-beachy ezivayo nazo zonke izinto eziluncedo zekhaya: oomatrasi abasemgangathweni, iilinen kunye nemiqamelo, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, iiTV ezinescreen esikhulu, izithethi zomculo kuyo yonke i-condo, iitawuli ezininzi, kunye newasha / isomisi. Ukongeza, bonelela ngayo yonke into oyifunayo ukuze ujabulele ulwandle:
Iitawuli ezinkulu ezi-6 zaselwandle, izitulo zaselwandle ezi-4, iambrela, iibhodi ezi-2 ze-boogie, i-cooler, inqwelo kunye neshawari yangaphandle. Kukwakho nendawo yomlilo ngaphakathi kunye nendawo yomlilo kwibalcony ukuze uphumle emva kwemisebenzi yosuku.
Yiza uhlale usondele kuyo yonke! Idilesi ithi 253 Avenida Del Mar - yijonge kwimephu kwaye ubone ukuhamba kwayo ngokulula kuyo yonke into.
Le propathi kunye nezinye ezintathu ziyafumaneka kwirenti yexesha elide. Jonga ifoto yangaphandle yesakhiwo ukusuka kwisitrato kwaye uzibonele uhlala apha :)
I-Avenida Del Mar lilitye elinqabileyo laseSan Clemente. Ubuncinci sineendawo zokutyela ezili-10 ezikhethekileyo (jonga i-yelp kodwa i-Nick's, iSouth ye-Nick's, iVine, iTaka-o, i-Beachfire, i-El Ranchero, i-Cellar, njl.). Imarike yomfama ibakho rhoqo ngeCawe ngapha kwesitalato ukusuka kwi-condo- igqibelele ukuba isitokhwe seveki. Sinevenkile yekofu emangalisayo ebizwa ngokuba yi-Bear Coast Coffee ezantsi nje kwenduli kwi-pier kunye ne-beach trail yokuhamba-indlela egqibeleleyo yokuqala usuku. Okokugqibela, sinepaki engaphaya kwendlela ukuze abantwana bayidlale. Indawo yethu ikhethekile ngokwenene.
Sinolunye uluhlu olubini kwesi sakhiwo esilungele izilwanyana:
I-Oceanview Condo kumbindi weSixeko w/ Itubhu yaBucala eshushu
I-Beach Condo ene-Yard Walking Dist kuyo yonke into!
Ndilapha ngenxa yakho ngexesha lokuhlala kwakho kodwa inqanaba lethu lokusebenzisana likuwe. Nditsalela umnxeba okanye umyalezo obhaliweyo kuphela. Uya kukwazi ukuzihlola xa ufika. Sinikezela ngomshini kaMnu. Coffee ngekofu ephantsi, izihlungi, i-creamers kunye ne-sweeteners.
Ndilapha ngenxa yakho ngexesha lokuhlala kwakho kodwa inqanaba lethu lokusebenzisana likuwe. Nditsalela umnxeba okanye umyalezo obhaliweyo kuphela. Uya kukwazi ukuzihlola xa ufika.…